SADC Yozeya Nyaya yeZimbabwe neChina muZambia
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vaenda kuZambia kumusangano weSADC Troika uchaitwa neChina.
Vatungamiri venyika dzichapinda mumusangano uyu vanoti VaRupiah Bwenazi Banda veZambia, VaArmando Emilia Guebuza veMozambique naVaJacob Zuma veSouth Africa.
Musangano uyu ndewekugadzirisa kunetsana kuri kuitika muhurumende pakati pemapato ose ari muhurumende yemubatanidzwa. VaMugabe vari kunetsana naVaTsvangirai pamusoro pemafambisirwo ebasa rehurumende, VaTsvangirai vachiti VaMugabe vari kuita humbimbindoga, ukuwo VaMugabe vachitiwo zvose zvavari kuita vanozvibvumirwa nebumbiro remitemo yenyika.
MDC yaVaTsvangirai iri kutiwo nhengo dzayo dziri kugara dzakashungurudzwa nevatsigiri veZanu PF, pamwe nemapurisa akarerekera kuZanu PF.
Vari kuendawo kumusangano uyu vanosanganisira mutungamiri mutsva weMDC diki, VaWelshman Ncube, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, Va Arthur Mutambara. Vaviri ava vari kunetsanawo, VaNcube vachiti ndivo vanofanirwa kuva mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, uye munhu anomirira bato ravo muhurumende, kwete VaMutambara.
Ukuwo VaMutambara vari kutiwo ndivo vakasaina pachibvumirano cheGlobal Political Agreement, nokudaro ndivo vanoramba vari munhu anomirira bato iri muhurumende. Makakatanwa aya asvika pasina kumira zvakanaka zvokuti vaviri ava havasi kutaudzana pavanenge vari mudare remakurukota.
Vasati vaenda kuZambia, VaTsvangirai vaita musangano naVaBingu waMutharika vekuMalawi, vakaitawo mumwe musangano zvakare nemutungamiri weTanzania, VaJakaya Kikwete. VaTsvangirai vanga vachiudza vatungamiri veSADC mamiriro akaita zvinhu muhurumende yemubatanidzwa.
MDC inoti iri kuda kuti vatungamiri venyika dzemuSADC vataure zvakare nezvehwaro hwesarudzo negwara rakajeka.
Asi chipangamazano chaVaZuma, Muzvare Lindiwe Zulu, vanoti havasati vapedza kuita gwaro resarudzo nekudaro harisi kuzotaurwa nezvaro pamusangano weSADC Troika.
Sangano reHuman Rights Watch rinoti SADC inofanirwa kutsiura VaMugabe nevamwe vavo kuti vasaite zvemhirizhonga.
Mugwaro raburitswa neChitatu neHuman Rights Watch, sangano iri rinoti musangano we SADC Troika unofanirwa kutsuura VaMugabe zvakasimba kuti vasarambe vachishungurudza vetsigiri veMDC nemasangano akazvimirira oga.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru weYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe, VaSidney Chisi, vanoti havafunge kuti pane zvingaitwe neSADC pakuomesera VaMugabe.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika hadzisi kunyatsowirirana pane zvingaburitswe nemusangano weSADC Troika.
Asi vamwe vanoti Africa inofanirwa kukura yogadzirisa matambudziko ayo, asi vamwe vachiti nyaya yeZimbabwe inonetsa zvekuti inotoda vanhu vemuZimbabwe pachavo kuti vaigadzirise.
Nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaClifford Mashiri, vanoti havaone SADC ichibuda nechisunga chine hudzamu panyaya yeZimbabwe.